SJRC S70W GPS 720P 2.4Ghz WiFi FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Drone မှစျေးနှုန်း ...
အစရေဒီယို-controlled device များRC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူ SJRC S70W GPS စနစ် 720P 2.4Ghz Wi-Fi FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူ SJRC S70W GPS စနစ် 720P 2.4Ghz Wi-Fi FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
စျေးနှုန်း SJRC S70W Dual GPS 2.4G WIFI FPV Drone RTF Black
€ 101,50 - မေလ 2020, 11
€ 101,67 - Aprilပြီလ 2020, 28
€ 101,20 - Aprilပြီလ 2020, 20
€ 100,55 - Aprilပြီလ 2020, 13
€ 101,89 - Aprilပြီလ 2020, 7
€ 98,97 - မတ်လ 2020, 31
€ 102,96 - မတ်လ 2020, 23
€ 98,52 - မတ်လ 2020, 16
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 109,99 - ဇွန်လ 2019, 13
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 96,73 - မတ်လ 2020, 10
SJRC S70W 2.4G GPS စနစ် WIFI Dual-FPV RTF က Black မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
SJRC S70W 2.4G GPS စနစ် WIFI Dual-FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် RTF ဖြူ
SJRC S70W RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Wi-Fi FPV / နှစ်ချက် GPS စနစ် Module
SJ R ကို A / C S70W 1080P HD ကိုကင်မရာဝိုင်ဖိုင် GPS စနစ် FPV RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Quadcopter RTF
SJRC S70W နှစ်ချက် Dynamic Wide Angle ကင်မရာ RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Quadcopter နှင့်အတူ GPS စနစ် WIFI Follow FPV 1080P
အဆင့်မြင့် GPS စနစ် Assisted
ဂျီပီအက်စ်တိကျသော positioning ကို mode ကို Enable နှင့်တားဆီးအဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဆုံးရှုံး။ ဘက်ထရီအနိမ့်ဒါမှမဟုတ် signal ကိုရှုံးလျှင်ဖြစ်တဲ့အခါအဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်အော်တိုပြန်သွား Perform ပါလိမ့်မယ်။ အခုအသစ် function ကိုအတူ, သင်ပိုမိုပျော်စရာရှိသည်နှင့်ဘေးကင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။
မူလစာမျက်နှာမှ smart သို့ပြန်သွားသည် (RTH)
ဂျီပီအက်စ် mode ကိုအတွက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဟာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုသင်ချွတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားဒါကပွိုင့်မှနေအိမ်ပြန်ရောက်ပျံသန်းစေမည်သည့်အခါစာနယ်ဇင်းဒီခလုတ်ကို။ သငျသညျရှေ့တျော၌အထဲကပျံသန်းသည့်အခါသင့်ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုပြန်ရှာပါ။
FPV ဂီယာ & 720P Adjustments wide-angle ကင်မရာ
အပြည့်အဝ High Definition 720P ကို ​​Wi-Fi ကို FPV ကင်မရာပတ်ပတ်လည်ကြည့်ဖို့ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦး Designated အစက်အပြောက်သို့မဟုတ်ရိုက်ကူးများအတွက်စံပြ, သင်သည်သင်၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုမြင်သောအရာကိုတွေ့မြင်ခွင့်, ဿုံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ငါ့ကို Mode ကိုလိုက်နာပါ
သင့်ရဲ့ smart ဖုန်းအတွက်ဂျီပီအက်စ်မှ Follow, သင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သင်သွားရာ၌အမြင့်ဆုံးတိကျစွာအားဖြင့်သင်တို့ကိုသိမ်းပိုက်ရှိစေရေး။
အမြင့် Hold, Headless Mode ကို, One-Key ကိုယူရ-OFF / ကမ်းတက်နှင့်အရေးပေါ် Stop
500m အဝေးထိန်းအကွာအဝေးထက် ပို. ။ removable 7.4V 2500mAH, စွမ်းအင်-optimized စနစ်ဖြင့်မြင့်မားသောစွမ်းရည်အားပြန်သွင်းနိုင် Battery ကိုသင်တစ်ဦးစှာတိုးတက်လာသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွေ့အကြုံကိုပေး။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန် 15 မိနစ်အထိ!
4 ဘုန်းနဲ့ LED မီးညပျံသန်းမှု Assist
ထွန်းတောက်ညဥ့်သောနေ့၌ပျံသကဲ့သို့လွယ်ကူသောပျံသန်းလုပ်အလင်းအိမ် LED ။
ယေဘုယျ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: SJRC
item အဘယ်သူမျှမ: ။ S70W
ပစ္စည်း: ပလတ်စတစ် / သတ္တု / အီလက်ထရောနစ်
Quadcopter Size: 50 50 X ကို X ကို 17.5cm
Quadcopter အလေးချိန်: 700g
မော်တော်အမျိုးအစား: Brush မော်တော်
ထိန်းချုပ်ရေးအဝေးသင်: 500m အကြောင်း
FPV အဝေးသင်: 150m အကြောင်း
ကင်မရာမှန်ဘီလူး: FOV 120 ° / 2.0
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမုဒ်: HD ကို 1280 X ကို 720P
transmitter ကို Power: 3.7V 300mAh Li-Po ဘက်ထရီ
Quadcopter ဘက်ထရီ: 7.4V 2500mAh Li-Po ဘက်ထရီ
USB က Cable ကိုဗို့အား: 5V
အချိန်အားသွင်း: 3-6hours အကြောင်း
package အရွယ်အစား: 53.7 34.4 X ကို X ကို 19.6cm
package အလေးချိန်: 2kg
package မာတိကာ 1 x ကို SJRC S70W RC Quadcopter
1 Remote Control ကို x
1 3.7V 300mAh Li-Po ဘက်ထရီ x
8 x ကိုပန်ကာ
6 x ကိုလေယာဥ်ပန်ကာစောင့်တပ်ဖွဲ့
4 x ကိုကမ်းတက်ဂီယာ
1 x ကိုလက်စွဲစာအုပ်
SJRC S70W GPS စနစ် Follow ငါ့ကိုကင်မရာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပျံသန်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
S70W GPS စနစ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်း SJR A / C
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူ SJRC S70W GPS စနစ် 720P 2.4Ghz Wi-Fi FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: SJRC, Item အဘယ်သူမျှမ: ။ S70W, ကြိမ်နှုန်း: 2.4G, ပစ္စည်း: ပလတ်စတစ် / သတ္တု / အီလက်ထရောနစ်, Quadcopter Size: 50 50 X ကို X ကို 17.5cm, Quadcopter အလေးချိန်: 700g, FPV: WIFI, ချန်နယ်: 4CH, Gyro: 6-ဝင်ရိုးတန်း, မော်တော်အမျိုးအစား: brush မော်တော်, ထိန်းချုပ်ရေးအဝေးသင်: FOV 500 ° / 150, မှတ်တမ်းတင်ခြင်း mode: HD ကို 120 X ကို 2.0P, transmitter ကို Power: 1280V 720mAh Li-Po ဘက်ထရီ Quadcopter ဘက်ထရီ: 3.7V 300mAh 7.4m, ကင်မရာမှန်ဘီလူးအကြောင်း: 2500m, FPV အဝေးသင်အကြောင်း li-Po ဘက်ထရီကို USB Cable ကိုဗို့အား: 5V, နှုန်းပါဝါ: ≤10W, အချိန်အားသွင်း: 3-6hours ပျံအချိန်အကြောင်း: 12-15mins, အထုပ် Size: 53.7 34.4 X ကို X ကို 19.6cm, အထုပ်အလေးချိန်: 2kg
1 SJRC S70W Quadcopter RC, 1, 1 x ကို Remote Control ကို, 3.7, 300 x ကိုလေယာဥ်ပန်ကာစောင့်တပ်ဖွဲ့, ကမ်းတက်ဂီယာ 8 x ပန်ကာ x,6x ကိုလက်စွဲစာအုပ် 4V 1mAh Li-Po ဘက်ထရီ x x
ခြေရာခံခြင်းဗီဒီယိုများနှင့်အတူ SJRC S70W GPS စနစ် 720P 2.4Ghz Wi-Fi FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
အဘို့အ6ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူ SJRC S70W GPS စနစ် 720P 2.4Ghz Wi-Fi FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
Mohd IKROMI - 2019 10 ဇွန်
အဆိုပါငါ့ကို Follow အနိမ့်အရေးပါ failsafe, ကောင်းသော range.720p FPV, ဆုံလည်ကင်မရာထောင့်လိုပဲ။ ပထဝီခြံစည်းရိုးတကယ် works.Beginner mode ကို။ ကျွန်မသင်ယူဖို့နှင့် Flyaway အပေါ်ကိစ္စကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲအန္တရာယ်ကင်းစွာပျံ SYMA x8 အတူတူညီ size ကို mount တစ်လောကလုံးကင်မရာ mount anymore.can တစ်ဦးအစပြုသူအဘို့ဤအကြံပြုပါသည်။ သာနည်းနည်းန်းကျင် FPV ဂီယာ 130m ပြီးတော့ကျနော်တို့ဘက်ထရီ propeller.proprietary ကိုပြောင်းလဲလိုလျှင် undo ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မယ်ဘယ်ဝက်အူသော့ခတ် lagging.propeller ကိုအသုံးပြုပါ။ အားလပ်ချိန်မှာဘက်ထရီကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲတစ်ဦးကနည်းနည်း။
JJRC JJPRO X5 RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်, Wi-Fi, FPV
Xiaomi က Mitu Wi-Fi FPV 720P ပျောက်ကွယ်သွား
2 မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်đi Inspire
3 309,43 €
Samebike 20LVXD30 ခေါက်။ သုံးနိုင်သောလျှပ်စစ် Moped ဆိုင်ကယ် E-bike EU plug
Samebike 20LVXD30 ခေါက်သိမ်းနိုင်သောလျှပ်စစ် Moped ဆိုင်ကယ် E-bike EU plug ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ...
ENGWE EP-2 500W ခေါက်သိမ်းနိုင်သောအရာတာယာလျှပ်စစ်စက်ဘီးနှင့် 48V 12.5Ah လီသီယမ် - ဘက်ထရီပါရှိသည်
ENGWE EP-2 500W ခေါက်သိမ်းနိုင်သောအဆီတာယာလျှပ်စစ်စက်ဘီးနှင့် 48V 12.5Ah လီသီယမ် - ဘက်ထရီကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ...